बझाङमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शुभारम्भ, तीन जनालाई बिमा सदस्यता प्रदान
बझाङमा आजदेखि औपचारीक रुपमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम शुभारम्भ भएको छ । नेपाल सरकारले ल्याएकोे स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बझाङमा पनि शुभारम्भ भएको हो । राष्ट्रिय बिमा नीति २०७१ ले कार्यक्रम दीर्घकालीन लक्ष्य र मुख्य उद्देश्य निर्धारण गरेपछि कार्यक्रम लागू भएको हो।
यो कार्यक्रमले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोगमा सुधार ल्याउने स्वास्थ्य बिमा प्रबन्धक नरेश कुमार चौधरीले बताए। गरिब, पिछडिएका अतिविपन्न, महिला, दलित, जनजातिले यसबाट फाइदा लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता, दक्षताका साथै जवाफदेहीतामा सुधार ल्याउने स्वास्थ्य बिमाका प्रदेश नम्बर ७ का संयोजक जनक बहादुर साउँदले बताए। बझाङमा यो कार्यक्रम लागू गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मीका साथै सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया र जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेपछि बिमा कार्यक्रम शुभारम्भ भएको उनको भनाई छ।
जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा जिल्ला अस्पतालका कार्यलय प्रमुख डाक्टर अनुप रेग्मीको अध्यक्षतामा र समन्वय समितिका संयोजक खडकबहादुर खड्काको प्रमुख आथित्यमा उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको घोषणा गरिएको हो । कार्यक्रमले गरिब र पिछडिएका अतिविपन्न वर्गहरुलाई ठूलो राहत पुग्न बताए । यसका साथै कार्यक्रम सफल पार्न आफ्नो क्षेत्रबाट हुने सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए । यस्तै कार्यक्रमका अध्यक्ष डा रेग्मीले कार्यक्रम सफल पार्न सबैको साथ र सहयोगको खाँचो रहेको समेत बताए। दुईजनालाई बिमा सदस्यता (परिचय पत्र ) पत्र प्रदान गरेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो । जसमा जयपृथ्वी नगरपालिका १० की दर्ता सहयोगी नवलक्ष्मी चित्रकारले कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा समन्वय समितीका संयोजक खड्काले बझाङ जिल्लाको प्रथम सदस्यता लिएका हुन् । यसका साथै प्रमुख अतिथिले दुईजना जेष्ठ सदस्य विस्नादेवी दाई र मोतीकला दमाईलाई सदस्यता प्रदान गरी बिमा कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो।
स्वास्थ्य बिमा गर्नेले के पाउँछन् ?
वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयामा ५ जना परिवारको स्वास्थ्य बिमा गर्न सकिने र यसबाट एक जनाले एक पटक ५० हजार बराबरको सेवा सुविधा निःशुल्क रुपमा लिन सक्ने छन् । पाँचै जना एकैपटक बिरामी परे एक जना सदस्यले १० हजार बराबरको सेवा लिन सकिने ब्यावस्था छ ।
५ जनाभन्दा बढी परिवार हुनेका लागि ४२५ रुपैयाँ थप हुने र सेवा थप १० हजारले वृद्धि हुने गर्छ । ५ जनासम्मको परिवारले दैनिक ७ रुपैयाँ छुट्याउँदा एक वर्षका लागि योगदान रकम जम्मा हुने र यो रकम फिर्ता नहुने बिमा प्रबन्धक चौधरीले जानकारी दिए। स्वास्थ्य बिमा गर्ने हरुले १ हजार १ सय १८ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाउने ब्यवस्था समेत रहेको छ ।
प्रदेश नम्बर ७ को कैलालीमा २०७३ जेठ १ गते देखि सेवा सुरु भएको थियो । इलाम र बाग्लुङमा २०७३ भदौ १ गते, म्याग्दी, कास्की, पाल्पा, अछाम र बैतडीमा २०७३ फागुन १ गते स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । तनहुँ, गोरखा, भत्तपुर, मकवानपुर, चितवन, जुम्ला र जाजरकोटमा २०७४ भाद्र १ गते, झापा, सिन्धुली, सुनसरी, रोल्पा, सोलुखुम्बु, सुर्खेत, बर्दियामा २०७४ मंसिर १ गतेदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य बिमा विभाग प्रदेश नम्बर ७ का संयोजक जनक साँउदेले बताउनु भयो । यस्तै, रौतहट, पर्सा र महोत्तरीमा समेत कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ भने बाजुरा र बझाङमा समेत स्वास्थ्य बिमा शुभारम्भ भइसकेको छ ।
अबको केही महिनापछि नेपालका ३९ जिल्लामा कार्यक्रम लागू हुने साँउदले बताउनु भयो । उनका अनुसार हालसम्म ३० जिल्लामा ५ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् ।
कसरी गर्न सकिन्छ स्वास्थ्य बिमा ?
स्वास्थ्य बिमाका लागि सहयोगीहरु स्थानीय सर्वसाधारणकै घरघरमा पुग्नेछन् । बिमा गर्नका लागी बिमा दर्ता सहयोगीलाई सुरुमा तालिम समेत प्रदान गरीएको छ । यदि कुनै व्यक्तिले स्वास्थ्य बिमा गर्न चाहेको खण्डमा सहयोगीहरु घरमा नै पुगेर बिमाका बारेमा जानकारी गराउने, फोटो खिच्ने र फाराम भर्ने गर्छन् । त्यसपछि तत्कालै स्वास्थ्य बिमा गरेका व्यक्तिलाई कार्ड उपलब्ध गराइनेछ । बझाङ जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहरुमा ९४ वटा वडाहरु रहेका छन् । जस अनुसार एक वडाका लागी एक जना दर्ता सहयोगी अर्था ९४ जना दर्ता सहयोगी परिचालन गरिएका छन् ।
५ जना परिवारले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् भने ५ वटै कार्ड तथा परिचय पत्र उपलब्ध स्वास्थ्य बिमाले उपलब्ध गराउने छ । उक्त कार्डका आधारमा नै बिरामी पश्चात्त ५० हजार रुपैया बराबरको सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ । यदि ५० हजारभन्दा बढी खर्च भएको खण्डमा बिरामी आफैंले बेहोर्नुपर्ने छ ।
वर्षौंपिच्छे स्वास्थ्य बिमा बोर्डले उपलब्ध गराएको कार्ड नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस बापत वार्षिक दुईहजार ५ सय बिमा बोर्डलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । परिवाको एक जना सदस्य बिरामीलाई मात्रै ५० हजार रुपैयाँ खर्च लागेको खण्डमा अरु सदस्य विरामी पर्दा लाग्ने खर्च आफैले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।